Best Portable akpa akwa Turntables 2017-Asịwo ji ndu - China 10TURNTABLES
> Best Portable akpa akwa Turntables 2017-Asịwo ji ndu
Akpa akwa Turntables nkọwapụta Comparison
Brand Name Turntable ọsọ Ọkà Okwu inyeaka Input Headphone Jack mkpọchi
Crosley CR8005A-DS ugbo agha 3 Speed Dynamic Full iche baraaka ọkà okwu √ √ Check Price
Crosley CR8005D-TW ugbo agha Deluxe 3 Speed Dynamic Full iche baraaka ọkà okwu √ √ Check Price
Electrohome agba ụta Vinyl Record Player Omuma Turntable (EANOS300) 3 Speed Dynamic Full iche baraaka ọkà okwu √ √ Check Price
Crosley CR6019A-BR Executive Turntable 3 Speed Dynamic Full iche baraaka ọkà okwu √ √ Check Price
1byone echebe-mbanye 3-Speed ​​Portable baraaka Turntable	 3 Speed Dynamic Full iche baraaka ọkà okwu √ √ Check Price
Victrola Vintage 3-Speed ​​Bluetooth akpa akwa Turntable 3 Speed Dynamic Full iche baraaka ọkà okwu √ √ Check Price
Jensen Portable baraaka Turntable 3 Speed Dynamic Full iche baraaka ọkà okwu √ √ Check Price
Ion Audio Vinyl Motion Deluxe | Portable 3-Speed ​​echebe-mbanye akpa akwa Turntable 3 Speed Dynamic Full iche baraaka ọkà okwu √ √ Check Price
Musitrend Vinyl Record Player Omuma Portable akpa akwa 3 Speed Dynamic Full iche baraaka ọkà okwu √ √ Check Price
Tyler Bluetooth akpa Vinyl Record Player Omuma Turntable 3 Speed Dynamic Full iche baraaka ọkà okwu √ √ Check Price
01 • Crosley CR8005A-DS ugbo agha Turntable
Unit arọ (lbs) = 5.5
Kọmpat, adaba na ọnụ ala. Ndị a bụ okwu na-akọwa turntables emepụta site Crosley. All si US, ha na-na na tụtere ihe turntable idaha na ahụkebe ngwaahịa na jidere mmasị ọtụtụ ndị turntable Fans.
Mgbe niile chọrọ a turntable na-adịghị amasị ọ bụla ọzọ? Nke a Crosley ugbo agha turntable abịa na nanị Disney sere na bụ ike na-egwu na atọ dị iche iche gbapụrụ ọsọ nke-enye gị na-ege ntị ihe nile ụdị ndia. Bụ na oké? Nke a turntable abịa na a headphone jaak maka oji ntị. N'ezie, ihe auxillary mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri na-arụnyere n'ime turntable, a na-emekwa ka na-ege ntị music mma ọbụna dị ka ị na-enwe ike iji gị ntị na-ahọrọ songs dị ka mmasị gị.
Ọ na-e mere na-dị ka obere ka o kwere. Na a funky oke nke na agba, na ọ na-ntekwasa red n'èzí na-acha odo odo na n'ime. Ọzọkwa, turntable abịa na ike na-nso stereo ọkà okwu nke na-enwe ike captivate gị uche na mkpụrụ obi. Nke a turntable na-ọnụ na $ 104,95.
Great player maka beginners.
Zuru okè onyinye maka enyi ma ọ bụ ezinụlọ.
The olu mmepụta bụ ubé ala.
02 • Crosley CR8005D-TW ugbo agha Deluxe Turntable
Ọzọ nlereanya site Crosley, a audio ụlọ ọrụ pụtara oge na oge ọzọ na ha bụ ndị ruru eru nke na-eme ka amamiihe turntables. Ọ bụrụ na ị na-achọ a turntable nke ahụ bụ ihe kwupụta classic n'akụkụ, nke a bụ ihe nlereanya ka unu. Ntekwasa na aja aja, nlereanya a na-mere na-enye anya a Devid agụghị ndị gbara anya.
Nke a nlereanya nke Crosley si turntables abịa ihe NP6 agịga. Ikpe na-anwale, a agịga ọ bụghị ihe ọjọọ ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ntinye larịị turntable. Na nke a turntable ị na-enwe ike jikọọ ekwentị gị site na Bluetooth. Nke a ana achi achi na ị ga-enwe ike ige ntị ọkacha mmasị gị songs dị ka adaba dị ka o kwere. Ọzọkwa turntable abịa na a headphone jaak nke-enye gị na-ege ntị gị ọkacha mmasị awụ ọsọ n'ugwu naanị. Nke a turntable nwere ikike ịgbanwe RPM nke ọ bụla ndekọ na ọ na-abịa na ike stereo ọkà okwu na delievers nke kacha mma audio arụmọrụ gị na-anụ.
Ọ bụ ezie na olu mmepụta pụrụ ịbụ ubé ala, ha niile uru maka ngwaahịa a maa-eme ka elu maka ya. Ọ na-ese ịtụnanya na-enweghị obi abụọ dị ịtụnanya player. Nlereanya a na-ọnụ na $ 74,48 na bụ maa ihe ịrịba bargain maka ego nke atụmatụ ya nwere.
Volume mmepụta pụrụ ịbụ a obere bit ala nke ukwuu.
03 • Electrohome agba ụtaVinyl Record Player Omuma Turntable (EANOS300)
Unit agba: Black
Imecha: Black textured ịkwanyere
Mwube IHE: MDF Cabinet (ajụ njupụta fiberboard)
Dekọọ Player: Ee
Dekọọ gbapụrụ ọsọ: 33, 45, 78
Usan edi: Plastic
Dekọọ Ụgbọala laghachi ARM ukpụhọde: NA
45 nkwụnye gụnyere: Ee
Ụgbọala laghachi: Ee
RADIO - ABỤ: No
USB Nchaji: No
USB na ndekọ na-: No
SD oghere: No
SD n'ụdị: No
SD ndekọ: No
Headphone Jack: Ee
Inyeaka ọsọ ọsọ: Ee
Ọkà Okwu Size: 2 x 3 "5W 8Ohm
Nhazi ụda: No
IKE EPS: Mpụga
IKE nkwụnye ọsọ ọsọ: 120V - 240V (50/60 Hz)
Ike oriri: 19 Watts
Ugboro nso (AM): NA
Ugboro nso (FM): NA
Akụkụ: 18.5 "x13.38" x5.9 "
Unit arọ: 13,82 lbs
Ihe na-gụnyere: na-agba ụta akpa akwa Turntable , 45 Record nkwụnye, AC nkwụnye, Ntụziaka Manual, 1 Year Akwụkwọ ikike, ndụ Nkwado Ndị Ahịa
Electrohome kemgbe na-eduga emeputa nke n'ji na kọmputa na ngwaahịa ihe karịrị 100 afọ. Ha ahịa ọrụ bụ nke abụọ nke ọ bụla dị ka ha nwere ndụ ahịa nkwado. Nke a 3-in-1 igbe turntable nwere a imewe na oké style na-enye gị oké udo nke uche n'ihi otú obere na ọ bụ.
Nke a turntable n'ike mmụọ nsọ si 1960. The Electrohome agba ụta Vinyl Record Player Omuma Turntable bụ ike igwu egwu vinyl ndekọ na kpọmkwem nke gị music si kpọmkwem nke gị moblie ngwaọrụ. Nhọrọ, a headphone jaak na-nyere maka oji ntị. Nke a turntable na-chọpụtara na ihe niile osisi kabinet nke na-enye ohere wuru na ọkà okwu aka iru ya n'ụzọ kwekọrọ nnọọ nwere nke na-anapụta ndị kasị mma audio arụmọrụ-emetụ gị n'obi. N'ezie, ọ na-abịa na a sapphire tipped seramiiki agịga nke na-enye a ọkụ na ndị ọzọ eke vibe.
Ntekwasa na nwa, ọ bụ imewe bụ mara na nwere na ochie Devid agụghị ndị gbara anya. Ọ na-okokụre na nwa ịkwanyere na nwere a plastic n'efere dị mbadamba. Nke a turntable na-agbụ na-adịgide adịgide maka a nnọọ ogologo oge. Dị ka ọtụtụ turntables, ọtụtụ vinyls na-enwe ike na-egwuri were were. Nlereanya a na-ọnụ na $ 49,91 na bụ oké na-ezu ohi.
Large mkpuchi ya mere na ọ nwere ike na-emechi na-egwu egwu.
Ọkà okwu ndị dị n'akụkụ kama nke n'ihu. N'ihi ya na-enye mma zuru multidirections.
Nwere data n'ọdụ ụgbọ mmiri na mkpọchi na n'ihu.
Ọzọ ahụkebe nlereanya site Crosley, nke a bụ a akpa akwa turntable n'adịghị ihe ọ bụla ọzọ. The Crosley CR6019A-BR Executive bụ ike igwu egwu na atọ dị iche iche gbapụrụ ọsọ. Ọ mejupụtara ihe auxillary cable na-enye ohere ka ị na na ọkacha mmasị gị songs ezie na gị onwe gị mobile ngwaọrụ na a USB ọdụ ụgbọ mmiri gị Windows ma ọ bụ Mac akwado kọmputa.
The akpa akwa na ọbọp ke ọla plated ngwaike. Ntekwasa na aja aja, n'ezie, ọ na-enye anya a n'ezie Devid agụghị ndị gbara vibe. N'eziokwu, ọ na-abịa na ike na-nso stereo ọkà okwu nke ahụkebe àgwà. Ụda na ogwe aka nke na-arụnyere n'ime turntable na-pịa imezi n'agbanyeghị na ọ na-aka na-achịkwa, ihe ndekọ ga-akpaghị aka na-akwụsị mgbe o kwusịrị ya tracks.
Ọnụ na naanị $ 81,52, nlereanya a bụ uru ọ bụla dollar nọrọ. Ọ bụ zuru okè onyinye maka ndị enyi gị ma ọ bụ ezinụlọ. Adaba, mfe iji na-nnọọ ọrụ enyi na enyi, nlereanya a bụ maa otu n'ime anyị n'elu nhọrọ.
Ike idekọ music na MP3 faịlụ site na USB ọrụ.
Great player maka ihe ọ bụla beginners.
Volume mmepụta bụ ubé ala nke ukwuu.
05 • 1byone echebe-mbanye 3-Speed Portablebaraaka Turntable
Bụghị nanị inwe ihe ịtụnanya sleek imewe, a turntable nwere ihe nile na ihe ike ka gị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ntinye larịị turntable. Achọ ihe oké ọnụ na obere turntable? Ị zaa bụ 1byone echebe-mbanye 3-Speed Portable baraaka Turntable .
Ọ bụ ike na-egwu ihe ndekọ na atọ dị iche iche gbapụrụ ọsọ. Ọzọkwa, Ọ e mere ka a akpa imezi turntable ọbọp na Pu akpụkpọ anụ na a osisi kabinet. Mara ma ukporo, nlereanya a bụ kpọrọ onye na catches anya. Obere andcompact, ị na-na na ike na-echekwa a n'ebe ọ bụla na oge obula. N'ozuzu, na-enye ya a sleek ma ịtụnanya imewe enwetaghị gị ntị.
Nke a turntable nwere ike ezi ụda ogwe aka na a adụ damping usoro. Nke a turntable nwekwara mejupụtara n'ihu n'ihu na-ekwu okwu maka ka mma ụda àgwà. N'ezie, ọ na-nyere na a headphone jaak na-enye gị na-ege ntị naanị dị ka mma. Althought ya skips a ntakịrị mgbe ọ na-abịa ọhụrụ vinyls, ego nke Uru nlereanya a nwere na-eme ka ya maka ya. Nlereanya a na-ọnụ na $ 59,99.
Anya ịtụnanya na mfe melite na-egwuri.
Obere na kọmpat.
06 •Victrola Vintage 3-Speed Bluetooth akpa akwa Turntable
Bright, pụtara ìhè na eyecatching. The Victrola Vintage 3-Speed Bluetooth akpa akwa Turntable nwere a dị iche iche nke atụmatụ mgbe ọ na-abịa music. Nke a turntable nwere wuru na ọkà okwu na ike ga-eji ma ọ bụghị site vinyls, auxillary Gịnị na site a ọrụ Bluetooth.
All na ihe ike ka gị mma. Ọrụ Bluetooth bụ oké mgbe ị na-enweghị vinyls ma ọ bụ ọ bụla auxillary Gịnị ugbu a. Dị ka ị na-na na ike ekewapụkwa handedly egwu ọ bụla music na ị chọrọ site na ị na ngwaọrụ. Ọ na-abịa a headphone jaak maka oji onwe-ege ntị nakwa.
Ụdị si Victrola na-iji ele anya dị ka ochie dị ka o kwere. Ọ bụ sleek, ịtụnanya na ọ na-enye ndị nostalgic vibe nke ihe american ụlọ nri. Ịtụle niile atụmatụ na price nke nlereanya a, ọ ga-onye gị na n'elu nhọrọ ma ọ bụrụ na ị na-achọ a turntable. Nlereanya a na-ọnụ na $ 57,15.
Zuru okè stowaway enyi na ọ bụ nnọọ obere.
Great ndekọ player na ọkà okwu maka nke a price.
07 • Jensen Portable baraaka Turntable
Mfe na ya kasị mma, na Jensen Portable baraaka Turntable bụ a belt chụpụrụ turntable na-ike na-egwu na atọ dị iche iche gbapụrụ ọsọ nke na-enye ohere kasị vinyls na-egwuri were were. E na nwa, n'ezie, ọ nwere na ndị agadi ochie akpa akwa vibe na ọ bụ n'ezie na-atọ.
Gịnị na-eme ihe nlereanya a guzo bụ na o nwere a usoro na-eme ka ụda na ogwe aka laghachi ya si n'ọnọdụ mbụ mgbe vinyl ka okokụre na-akpọ ya tracks. Amazing ọ bụghị ya? E wezụga nke ahụ, a turntable abịa ihe niile ọhụrụ Audacity Software maka adaba na ndekọ na edezi gị ọdịyo. N'ihi ya, ị ga-chọrọ ịzụta ọ bụla mmezi softwares dezie gị ọdịyo.
Ọkụkụ nnụnụ abụọ na otu nkume. Ọ na-abịa na ihe auxillary mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri na nwere ike jikọọ site na gị mobile ngwaọrụ ọ nwere RCA mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri maka ndị ọzọ okwu. Ghara iche dị ka a 120V AC nkwụnye a gụnyere maka ezigbo ụda perfomance. Additionaly, ọ bụ nnukwu mkpuchi nwere ike emechi na-egwu egwu gbochie ájá si abịa. Ma ala akụkụ kasị mma, ya price. Nlereanya a na-ọnụ na $ 94,95.
Ọkà okwu ndị dị n'akụkụ na-enye mma multi-directional ụda.
08 • ion Audio Vinyl Motion Deluxe | Portable 3-Speed ​​echebe-mbanye akpa akwa Turntable
Ọzọ nlereanya site ion, ọ na-wuru na klas na àgwà. The ion Audio Vinyl Motion Deluxe bụ a obere 3-Speed ​​echebe-mbanye akpa akwa Turntable na wuru na ọkà okwu maka kasị mma ụda àgwà. Nke ahụ pụtara na ị na-adịghị mkpa iji nweta ọ bụla ọzọ na-ekwu okwu iji melite gị turntable. Bụ na mma?
Onye nke kasị mma akụkụ nke a turntable bụ na batrị rechargable iji hụ awa ụtọ. Ọ nwere ma ihe auxillary n'ọdụ ụgbọ mmiri na a headphone jaak na-egwu music si kpọmkwem nke gị moblie ngwaọrụ na onwe listeningrespectively.
Nke a turntable bụ oké nlereanya maka onye ọ bụla na-achọ inweta ihe ntinye larịị player. Ọ bụ oké adaba na nwere ike mfe echekwara. Nke ahụ bụ ihe kasị mkpa banyere a obere akpa akwa player ọ bụghị ya? Nlereanya a na-ọnụ na $ 37,67 na ị ga-aka gị na onye na taa.
Great isi ntinye larịị player.
Adaba na ezi na ìgwè ntọala.
Obere obere turntable na esịtidem batrị chaja na wuru na okwu.
09 • Musitrend VinylRecord Player Omuma Portable akpa akwa
Otu n'ime isi ihe ndị Musitrend Vinyl Record Player Omuma Portable akpa akwa bụ na ọ bụ fechaa, erikpu naanị 5.8 lbs. Ọ e mere ka a akpa akwa na-abịa na ihe dị mfe ahụ maka adaba ebu. Ọ bụ ihe ịtụnanya otú Musitrend bụ ike ime ka a nlereanya ka ìhè.
Nke a turntable bụ incredibly vasatail na ọ bụ ọrụ enyi na enyi n'ihi na ọ na-abịa ihe auxillary ọdụ ụgbọ mmiri gị mobile ngwaọrụ, a headphone jaak maka oji n'ige ntị, na ihe RCA mmepụta n'ihi ọzọ okwu. All atụmatụ na ị chọrọ niile juru n'ọnụ n'ime nke a nlereanya. Ọ bụrụ na ị ka na-atụle, lee dịghị ihe ọzọ.
The audio quality bụ n'ezie ihe ijuanya n'ihi na eziokwu na ọ na-wuru bú osisi na ya na-ọbọp na akpụkpọ anụ maka a ọzọ mara anya. Na a nta aka nke red n'ime, ọ n'ezie anya ahụkebe. Ghara ichefu na ọ bụ ike na-egwu na 3 dị iche iche gbapụrụ ọsọ maka a ukwuu iche iche nke vinyls. Nlereanya a na-ọnụ ezi uche na $ 59,99.
Abịa na USB otú ị nwere ike ịmepụta MP3 faịlụ na kọmputa gị.
Speed ​​nwere ike ịkụda mgbe ọtụtụ awa ebre.
10 • Tyler Bluetooth akpa Vinyl Record Player Omuma Turntable
Ọ bụrụ na ị chọrọ a turntable na anya ukwu na-ada oké, nke a bụ ihe nlereanya ka unu. The Tyler Bluetooth akpa Vinyl Record Player Omuma Turntable bụ ike igwu egwu vinyl ndekọ na mobile ngwaọrụ site na a USB n'ọdụ ụgbọ mmiri arụnyere. N'ezie ọ nwere auxillary input na-enye ohere ọzọ nhọrọ maka ịkpọ gị mobile ngwaọrụ.
Nke a turntable nwekwara mejupụtara ihe headphone jaak na-enye ohere onwe ntị. Nke a na atụmatụ ga-maa-erite uru ndị na-ahọrọ ụfọdụ oge dị jụụ naanị na zoning si ụwa. Ọ na-nwere ihe RCA mmepụta maka ihe ọ bụla additonal ọkà okwu ị chọrọ. Ọ nwere ike na-egwu na atọ dị iche iche gbapụrụ ọsọ dị ka nke ọma nke na-enye ohere kasị vinyls na-egwuri.
E na nwa nọ n'èzí na-na-acha odo odo na n'ime, ọ na-enye anya a nnọọ mara vibe ya. Ọzọkwa, anya ime okwu na agbanyeghị. Nlereanya a na-adịghị nnọọ anya ọma ma dị mma. Ọ bụ ezie na ọ pụrụ nwere obere wobbles n'elu ikpo okwu, ọ na-wuru-ewu na-ekwu okwu na-chọpụtara na a osisi kabinet maka ezigbo audio perfomance. N'ihi ya nlereanya a bụ fọrọ nke nta nke abụọ ọ bụla. Nlereanya a na-ọnụ na $ 89,95.
Great onyinye maka ndị enyi na ezinụlọ.
Little wobbles n'elu ikpo okwu.